#'Jeermisku ma ahan wax Jira':Daadihiye Ka Tirsan Fox News ayaa sheegay in uusan gacmaha Dhaqiin 10 sano | Get Latest News From Horn of Africa |
#’Jeermisku ma ahan wax Jira’:Daadihiye Ka Tirsan Fox News ayaa sheegay in uusan gacmaha Dhaqiin 10 sano
Pete Hegseth ayaa beenisay jiritaanka jeermiska, isagoo yiri: “Ma arko iyaga, sidaa daraadeed ma ahan kuwo dhab ah”
Weriye ka tirsa telefishinka Fox News ee dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Pete Hegseth ayaa xilli uu barnaamij tebiyay sheegay in muddo toban sano ah aanu gacmihiisa dhaqin, maadaama “jeermiska aanu ahayn wax dhab ah”.
Hegseth oo ka hadlayay barnaamijka Fox and Friends ayaa sheegay in noolaha ilmaha aragtada ah aanu wax jira ahayn maadaama aan si caadi ah loo arki karin.
Waan iska tallaalaa jeermiska ayuu sheegay weriyahan wax ku soo bartay jaamacadaha caanka ah ee Harvard iyo Princeton.
Dadka ku taxan baraha bulshada ayaa qaabab kala duwan uga falceliyay hadalka weriyahan caanka ah, iyadoo dadka qaarna ay taageereen halka kuwa kalena ay walaac ka muujiyeen.
Xarunta ka hortagga iyo xakameynta cudurrada ayaa sheegtay in gacmaha oo si joogta ah loo dhaqo ay “ay tahay qaabka ugu wanaagsan ee lagula dagaallami karo jeermiska, xanuunnada iyo in jeermiska uu ku faafo dadka kale”.
Jeermiska ku faafi kara gacmaha oo aan la dhaqin ayaa waxaa ka mid ah salmonella iyo E coli.
Madaxweyne Donald Trump oo waraysiyada ugu badan siiyay telefishinka Fox ayaa dhawr jeer qiray inuu aad uga baqo jeermiska isla markaana uu marar badan dhaqo gacmihiisa.
Buugga The Art of the Comeback ee uu Trump qoray sanadkii 1997 ayaa waxa uu ku dhaliilay gacan isku salaamidda oo uu sheegay inay u badan yihiin dadka caanka ah.
Inta badan dadka ka falceliyay hadalka weriye Hegseth ayaa walaac iyo karaahiyo ka muujiyay dhaqankiisa.
Balse dadka qaar ayaa sheegay in aanay wanaagsaneyn ka badbadinta nadaafadda jirka, isla markaana ay taasi yareyn karto difaaca dabiiciga ah ee uu jirka kaga hortaggo jeermiska.